साउनमा मात्रै सुनको भाउ तोलामा झण्डै ६ हजार बढ्यो – Sanchar Patrika
साउनमा मात्रै सुनको भाउ तोलामा झण्डै ६ हजार बढ्यो
August 16, 2020 130
काठमाण्डौ – सुनको भाउ यो महिनामा मात्रै तोलामा ५ हजार ७ सय रुपैयाँ बढेको छ ।
साउन १ गते तोलाको ९२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ अन्तिम दिन आज तोलाको ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । आज हिजोको भाउमा तोलामा दुई सय रुपैयाँ घटेर सुनको भाउ तोलाको ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
यो महिना सुनको भाउले दैनिक जस्तै रेकर्ड बनायो । रेकर्ड बनाउने क्रममा सुनको भाउ अहिलेसम्मकै महँगो तोलाको एक लाख तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म पुग्यो । तर गएको आइतबारदेखि बुधबारसम्म ओरालो लागेको सुनको भाउ बिहीबार र शुक्रबार भने फेरि उकालो लाग्यो । शुक्रबारको भाउमा आज भने फेरि सुनको भाउ तोलामा २ सय रुपैयाँ घटेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै सुनमा लगानीकर्ता आकर्षित हुँदा भाउ महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै चाँदी यो महिना तोलामा ३ सय २० रुपैयाँ बढेको छ । साउन १ गते तोलाको एक हजार ५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज तोलाको एक हजार ३ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
चाँदीको भाउ पनि यो महिना रेकर्ड बनाउँदै तोलाको एक हजार ४ सय ३५ रुपैयाँसम्म पुग्यो । गएको मंगलबार अहिलेसम्मकै महँगो तोलाको एक हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको चाँदीको भाउ बुधबार एकैदिन तोलामा २ सय २५ रुपैयाँ घट्यो । तर बिहीबार र शुक्रबार उकालो लागेको चाँदीको भाउ आज भने तोलामा चाँदी ३० घटेको छ । चाँदी आज तोलाको १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ ।
Prevजे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! (भिडियो सहित)
Nextफिफाको महिला वरीयतामा नेपाल ९९ औँ स्थानमा
आजदेखि यी देशमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय हेर्नुहोस्
आज २०७७ साल’असोज’१८ गते आईतबारको राशिफल हेर्नुहोस्